China Kung Pao Chicken mveliso kunye nabenzi | Huikang
I-Kung Pao Inkukhu sisitya esidumileyo sendabuko esidumileyo ekhaya nakumazwe aphesheya. Ifakiwe kwi-Shandong cuisine, i-Sichuan cuisine, kunye ne-Guizhou cuisine, kwaye izinto zayo ezingavuthiyo kunye neendlela zahlukile. Imvelaphi yesi sidlo inxulumene nenkukhu efakwe isosi kwivenkile yaseShandong, kunye nenkukhu eqholiweyo eGuisiz cuisine. Kamva yaphuculwa kwaye yaqhutywa ngu-Ding Baozhen, irhuluneli yaseShandong kunye nerhuluneli yaseSichuan yeQing Dynasty, kwaye benza inkuku entsha ye-Gongbao. Sekudlulisiwe kwada kwanamhlanje, kwaye esi sidlo siye sahlulwa njengesitya senkundla yaseBeijing. Emva kwexesha, iKung Pao Chicken yasasazeka nakwamanye amazwe.
I-Kung Pao Chicken iphekwe nenkukhu njengesona sithako siphambili kwaye yongezwa ngamandongomane, isilili kunye nezinye izithako ezincedisayo. Olubomvu kodwa hayi iziqholo, iziqholo kodwa awoyiki, ivumba levumba eqinileyo, inyama egudileyo kunye necrispy. Ngenxa yokunambitheka kwayo okucocekileyo, ukuthamba kwenkukhu kunye nobumnandi bamandongomane.
NgoSeptemba 2018, yabalwa njenge "cuisine yaseTshayina" phakathi kwezitya ezilishumi zokuqala zaseGuizhou kunye nezitya ezilishumi zokuqala eSichuan.
I-Kung Pao Inkukhu ibonakaliswa ngobumnandi kwi-spicy kunye ne-spicyness kwi-sweetness. Ukuthantamisa kwenkukhu kunye nokuthamba kwamandongomane, umlomo uyababa kwaye uyakhrim, ubomvu kodwa awunongwe, ubulawu kodwa awomelelanga, kwaye inyama igudile kwaye iqaqambile.
Emva kokuba inkukhu ye-kung pao ingenisiwe elizweni, incam yolwimi ivakalelwa ngathi ibindindisholo kancinci kwaye ayina spicy, emva koko iyathandeka kwiincasa zeencasa, kwaye kuyakubakho ukuziva ngathi "kumuncu kwaye kumuncu" xa uhlafuna, inkukhu phantsi kweshushu, i-spicy, sour and sweet package, Itswele yasentwasahlobo, amandongomane enza abantu bafune ukuyeka.
Amagama eenkuku ze-Kung Pao kuyo yonke indawo ayafana, kodwa iindlela zahlukile:
Inguqulelo yeSichuan ye-Kung Pao Chicken isebenzisa amabele enkukhu. Kuba amabele enkukhu akulula ukuwancasa, inkukhu kulula ukuba ithambe kwaye ayithambisi. Kuya kufuneka uyibethe inkukhu ngasemva kwemela amaxesha ambalwa ngaphambi kokulinganisa incasa, okanye ubeke i-Egg enye emhlophe, le nkukhu iya kuthambeka ngakumbi kwaye igudile. Inguqulelo yeSichuan ye-Kung Pao Chicken kufuneka isebenzise amandongomane amafutshane kunye namaqhina esomileyo, kwaye incasa kufuneka ibe zi-lychee eziqholiweyo. Umnyhadala wesilili ubunzulu obosiweyo kunye nevumba elimnandi, uqaqambisa incasa ebabayo.
Inguqulelo ye-Shandong cuisine ye-Kung Pao Chicken isebenzisa ngakumbi amathanga enkukhu. Ukulungiselela ngakumbi ukuqaqambisa incasa yenkukhu ye-Kung Pao, i-Shandong cuisine ikongeza amahlumela e-bamboo okanye idayisi yehashe. Ukuziqhelanisa ne-Kung Pao Chicken kufana ngokufana nokutya kwaseSichuan, kodwa ingqalelo enkulu ihlawulelwa ukukhuthaza, ukuze kugcinwe inkukhu entsha.
Inguqulelo yeGuizhou yeKung Pao Chicken isebenzisa iCaba Chili, eyahlukileyo kwiinguqulelo zeSichuan kunye nezeShandong. Inguqulelo yeGuizhou yeKung Pao Chicken inetyiwa kwaye ineziqholo, emnandi kancinci kwaye imuncu. Nceda unike ingqalelo igama elithi "muncu". Kushushu kwaye kumuncu yenye yeempawu ezibalulekileyo ezahlula ukutya kwaseGuizhou ukusuka kwityhubhu yaseSichuan.
Egqithileyo Ezimnandi kunye neeRib Rare Spare
Okulandelayo: I-Chicken Chop kunye nePepper